Bala iNyanga yokuTyikitya kwakho neNyanga kwaye ufumanise iimpembelelo zakho kuwe - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Bala ukuSayina kweNyanga yakho apha kwaye ufumane ifuthe kubuntu bakho
Umqondiso wakho wenyanga utyhila ulwazi oluninzi malunga nobuntu bakho kwaye ubaluleke ngaphezu komqondiso wakho we-zodiac. USusan Taylor ukuxelela yonke into.
Ngaba uyazi ukuba ukongeza ekubeni ne-zodiac kunye nokunyuka komqondiso, unenyanga okanye umqondiso wenyanga? Ngabathandi beenkwenkwezi kuphela abathanda ukulazi eli candelo libalulekileyo, yiyo loo nto silapha ukuphucula ulwazi lobuntu bakho kunye neprofayili. Indawo emi kuyo iNyanga ngomhla wokuzalwa kwakho kunye neenkwenkwezi awayehamba kuzo zithetha lukhulu ngesimilo sakho, ngakumbi iimvakalelo zethu; Oku kunjalo ngakumbi kwimeko yabasetyhini. Umvumisi ngeenkwenkwezi, uSusan Taylor, utyhila iimfihlo zento ebalulekileyo yeenkwenkwezi kwaye atyhile indlela yokubala eyakho.
Luyintoni uphawu lwenyanga?
Ndingayifumana njani eyam?
Ukuqonda ngakumbi uphawu lwakho lwenyanga
Uthetha ntoni umqondiso weNyanga yam kwaye undimele?
Eli candelo lobuntu bakho liyahambelana ne- isikhundla se Inyanga ngexesha lokuzalwa kwakho. Ewe, umqondiso wakho wenyanga unxulunyaniswa neemvakalelo zethu esingakulungelanga ncam ukubonakalisa nokubonisa. Yintoni enomdla kukuba ngokutsho kwabavumisi ngeenkwenkwezi, ezantsi ezantsi, abantu bathambekele ekuboneni iimpawu zabo ezinxulumene neli nqaku endaweni yomqondiso wabo we-zodiac umzekelo. Okwangoku, abasoloko bekhululekile ukubeka le nto kubuntu babo emhlabeni.
Kwinkwenkwezi, iNyanga igxininisa ubuntununtunu, idomeyini engekho zingqondweni, ulawulo lweemvakalelo, ngokunjalo nenxalenye yobufazi efunyanwa ngumntu wonke ngaphakathi. Kufuneka ke ngoko sikuqonde ukubaluleka kwayo ukuze sifunde ngakumbi ngeziqu zethu. Lo mzimba we-astral awukhanyisi ngezenzo zethu kodwa kwezethu amandla emvakalelo kunye nokuphendula kwethu kwiziganeko. Isizisa ngobuso ngobuso bethu, eyona nto ingokwemvelo ingaphakathi kuthi kwaye, ngokungathandabuzekiyo, kwaye oko kubonakala kunzima.
Ukwazi nje uphawu lwakho lwe-zodiac okanye uphawu olukhulayo alonelanga xa ufuna ukuya nzulu kwicandelo lokuvumisa ngeenkwenkwezi. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukwazi uphawu lwakho lwenyanga, kuba le yokugqibela ihambelana namandla ethu okwamkela, iprofayile yethu yothando kunye neemvakalelo zethu ngokubanzi. Kude kuthiwe simele icandelo lobufazi kubuntu bethu.
- Bala uphawu lwakho olukhulayo apha -
Ngelixa imiqondiso yethu yeenkwenkwezi imele ubuntu bethu bangaphandle, uphawu lwakho lwenyanga lubandakanya umhlaba wakho wangaphakathi, imeko yakho yeemvakalelo kunye nokuqonda kwakho. Ifuthe kwindlela ovakalisa ngayo kwaye uphile kwiimvakalelo zakho. Ichaphazela nokubanakho kwakho ukuhlala kakuhle nabo bakungqongileyo. Ukuba ungumfazi, uphawu lwenyanga lunendima enkulu kuba luchaphazela ngokuthe ngqo ubufazi bakho kunye nendlela yakho yothando. Ngamanye amaxesha kunokuba kubaluleke ngakumbi kunophawu lwakho lwelanga.
Ulubala njani uphawu lwenyanga yakho kumanyathelo ama-3
Ukuze uyiqonde, kufuneka uyenze bonisa umhla, ixesha kunye nendawo yokuzalwa . Nje ukuba unalo lonke olu lwazi, uya kuba nakho ukugqiba kunye nenxalenye ebalulekileyo yobuntu bakho.
yintoni uphawu lwakho lweenkwenkwezi
1) Fumana inani elihambelana nonyaka wakho wokuzalwa
Ukuqala, nceda ujonge kule theyibhile ingezantsi ukumisela inani elihambelana nonyaka wakho wokuzalwa. Nceda uqaphele ukuba ukuba wazalwa ngonyaka wokutsiba, uyakufuna ukongeza u-1 kwinani elikwitafile.
2) Chonga inani elihambelana nenyanga yakho yokuzalwa
Ukufumanisa inani elihambelana nenyanga yakho yokuzalwa, jonga kuluhlu olungezantsi kwaye, kwakhona, uqaphele eli nani lokugqibela ngononophelo.
Ukuba wazalwa ngoJanuwari, inombolo edibeneyo yile: 0
3) Yongeza iziphumo zakho kusuku lwakho lokuzalwa
Thatha usuku lwakho lokuzalwa. Emva koko yongeza kwinani elihambelana nonyaka wakho kunye nenombolo ehambelana nenyanga yakho esele uyiqaphele.
Ukuba ufumana isixa esiphakathi kuka-0 no-28, yiya ngqo kuMqondiso wenyanga yam u… ngezantsi.
Ukuba ufumana isixa esiphakathi kwama-29 nama-54, susa ama-27
Ukuba ufumana isixa esiphakathi kwama-55 nama-81, thabatha ama-55
Ukuba ufumana isixa esingaphezulu kwama-81, thabatha ama-82
Kwaye iziphumo ziku; uphawu lwenyanga yam…
Ukuba ufumana isixa se:
0 okanye 1 okanye 27 okanye 28, uphawu lwakho lwenyanga IARIES
2 okanye 3 okanye 4, ungu TAURUS ukuhambelana namazwi
5 okanye 6, ungu GEMINI
7 okanye 8, ungu UMhlaza
9 okanye 10, ungu LEO
11 okanye 12 okanye 13, ungu IVIRGO
14 okanye 15, ungu IPELA
16 okanye 17, ungu SCORPIO
18 okanye 19, ungu SAGITTARIUS
20 okanye 21 okanye 22, ungu UCAPRICORN
23 okanye 24, ungu I-AQUARIUS
25 okanye 26, ungu IPISCES
'Eli candelo lisinceda ekutyhilweni kweemfihlakalo ezithile ezichaphazela indlela esiziphatha ngayo. Umsebenzi wayo usibonisa indlela emasiyilandele xa sithandabuza, uyasikhanyisela kwimibuzo yethu kwaye usivumele ukuba siqonde ukuba sonke sinesakhono, elowo kuthi unezitshixo zokuziqonda kwaye azi nendlela yokuzisebenzisa.
Unayiphi impembelelo yenyanga yakho? Inamanqanaba amathathu empembelelo:
1) Indlela oveza ngayo iimvakalelo zakho
Uya kufunda ngakumbi nge uzihambisa njani iimvakalelo zakho kunye neemvakalelo zakho kwiindawo ezahlukeneyo zobomi bakho. Uya kufunda ngakumbi malunga namandla akho kunye nobuthathaka bakho, kwaye unokufumana nokuba yeyiphi imisebenzi elungele ubuntu bakho. Umzekelo, ukuba umqondiso wakho ungene kwiGemini, ucebisa ukuba ubenezakhono zonxibelelwano kunye nokubhala.
2) Iindawo okanye izifundo onomdla kuzo
Iitshathi zethu zendalo zahlulwe zaziindlu ezilishumi elinambini kwaye nganye kuzo ilawula indawo ethile ebomini bakho. Ubukho beNyanga endlwini bubonisa indawo yobomi apho uziva kakhulu. Umzekelo, ukuba uhlala kwiNdlu II, oko kuthetha ukuba ulwaneliseko kunye nokudakumba kunxulumene nezinto eziphathekayo kwaye ngothando uhlala unezinto.
3) Zeziphi iimpawu zelanga / zodiac onxibelelana nazo
Itshathi yokuzalwa ikuxelela ngayo ubudlelwane bakho nabanye abantu. Umzekelo, inyanga yeGemini iya kuhlala ihamba kunye nomqondiso we-Aries zodiac kuba yomibini imiqondiso iyakuthanda ukuthetha. Ngokuhlalutya itshathi yakho yokuzalwa, isazi ngeenkwenkwezi esinolwazi siya kutyhila zonke iinkalo zobuntu bakho, amandla akho, ubuthathaka, ukuhambelana kothando lwakho kunye neziganeko ezizayo ebomini bakho.
Yintoni itshathi yokuzalwa?
Ikwabizwa ngokuba yitshathi yendalo, isinika umfanekiso we-a isikhundla esinexesha kunye nendawo ozalelwe kuyo. Ngokutolika ubumbeko okanye unxibelelwano lweeplanethi ngexesha lokuzalwa kwakho, isazi ngeenkwenkwezi siya kuba nakho chonga kuphela ubuntu bakho, kodwa kunye nokuhambelana kothando lwakho. Isazi ngeenkwenkwezi senza oku ngokuthelekisa itshathi yakho yokuzalwa kunye neetshathi yeqabane lakho. Ivumela isazi ngeenkwenkwezi ukuba sazi amandla omntu okuziqhelanisa nehlabathi kunye nendlela aya kulimela ngayo ilizwe.
ngu 33 inombolo eyi master
Ngokufunda ngetshathi yakho yokuzalwa ngeenkwenkwezi, uya kuba nakho fumanisa into ekukhuthaza kwaye yintoni echukumisa imithambo-luvo nawe. Oku kukuvumela ukuba uchaze ngcono ukhetho lwakho lobomi, kwaye ugcine iimvakalelo zakho ziphantsi kolawulo. Unokufumana itshathi yokuzalwa yenyanga yabathandekayo bakho ukuze uyiqonde nzulu ngabo.
Leliphi inani elingu-111
-Funda eyakho izindlu zeenkwenkwezi -
Iimpawu zenyanga ezichaziweyo
Cofa kweyakho ukufumanisa indlela ekuchaphazela ngayo kunye nobuntu bakho.
Ukuba uphawu lwenyanga yakho yiAries
Ungumntu olwayo kwaye awusoze wakhutshwa yingcinga yomceli mngeni. Ukungabi namonde ngamanye amaxesha kungakufumana okona kulungileyo kuwe kwaye ukhuphe icala lakho lokungxola. Xa uthandana, kufuneka ulawule ngamaxesha onke.
Ukuba uphawu lwakho lwenyanga yiTaurus
Ungumntu wokwenene ekhaya kwaye uyamthanda ukuchitha ixesha lakho kwiqamza lakho elincinci lokugqibelela. Izinto zakho zibalulekile kuwe kwaye kutheni zingenakuba njalo kuba usebenza nzima! Xa usebudlelwaneni, ufuna ukusondelelana ukuze uzive uqhagamshelene.
Ukuba umqondiso wenyanga yakho yiGemini
Ukudumisa kwakho ukuzonwabisa kunye nokudlala ngothando kubaluleke kakhulu. Uyibhola yamandla kwaye abantu bayakonwabela ukubakho kwinkampani yakho. Icala lakho elifunekayo kunye nokuziphatha okuphezulu kuthetha ukuba uyadika ngokukhawuleza xa uthandana kwaye usokola ukuzinza.
Ukuba umqondiso wenyanga yakho ngumhlaza
Umhlaza yi olona phawu lubuthathaka kwaye lulawulwa yiNyanga, ke uvelwano kunye nobunzima beemvakalelo akufuneki bothuse. Xa uMhlaza udibana nomntu ahambelana naye, baya kunyaniseka kude kube sekupheleni okukrakra.
Ukuba uphawu lwakho lwenyanga nguLeo
Uyibhola evuthayo yomnqweno kunye nokuzimisela. Ukuba phakathi kwakho kufana nokuba kwi-rollercoaster ngawo onke amahla-ndinyuka ongenakulindeleka obeka kuwo abantu. Icala lakho elibukhali ngokuqinisekileyo liqaqanjisiwe xa usenza amadinga.
Ukuba uphawu lwenyanga yakho yiVirgo
Ungomnye waba abona bantu bagxekayo nabagwebayo phaya. Imfuno yakho yemfezeko inokubona ukubambelela kulawulo kwaye ube sisigebenga. Kodwa ke uyaphumla xa ubamba iimvakalelo zomntu.
Ukuba uphawu lwenyanga yakho yiLibra
Ukuthetha ngeemvakalelo zakho kunye nento ohamba kuyo ayisiyonto inzima yeLibra ecacisayo. Icala lakho lothando liziswa ngaphezulu xa ufumana umntu omkhathalele ngokwenene kwaye ofuna ukuba naye.
Ukuba uphawu lwakho lwenyanga yiScorpio
Waziwa ngegama lakho isimilo esomeleleyo kunye necala elingenantsingiselo Oko kuthetha ukuba usoloko uthathelwa ingqalelo. Akukho nto ikoyikisayo okanye ikoyikisayo, echaza ukuba kutheni uphumelela rhoqo. Xa usebudlelwaneni, unokuba nomona owoyikisayo.
Ukuba uphawu lwakho lwenyanga yiSagittarius
Ulula kwaye awuthandi ukubandakanyeka kuyo nayiphi na into ephawuleka kakhulu. Uburharha bakho bubalasele kwaye abantu bayakonwabela ukuba phakathi kwakho. Kubudlelwane, unqwenela inkululeko yakho kwaye ulixabisile ixesha lokucinga ngezigqibo zakho.
inyanga kaDisemba entsha 2019
Ukuba uphawu lwenyanga yakho yiCapricorn
Awunguye owokuqala ukuvula xa kufikwa ekuthetheni malunga neengcinga zakho kunye neemvakalelo zakho. Ngokwendalo uzimele kwaye ubucala, kuthetha ukuba uyathanda ukujongana neengxaki zakho wedwa. Oku akuguquki kakhulu xa ufumana uthando nokuba…
Ukuba uphawu lwakho lwenyanga nguAquarius
Ubuntu bakho obukhethekileyo ngamanye amaxesha bunokulahla abantu xa befumanisa ukuba uyilo kangakanani kwaye ulapho ngokwenene. Uhlobo lwakho lobuhlobo kunye nokuthantamisa kuthetha ukuba abantu bayakuxabisa kwaye bakufumanise ukonwabisa. Xa usebudlelwaneni, wenza konke okusemandleni akho ukuzikhusela.
Ukuba uphawu lwenyanga yakho ziiPisces
Ubuntu bakho obunobubele novelwano buthetha ukuba ngamanye amaxesha iimvakalelo zakho zinokufumana into encinci kakhulu ukuba uziphathe. Icala lakho lokucinga likunceda ukuba ubaleke kwimithwalo yokuba novakalelo kunye nobunzima. Xa ufumanisa ukuba umntu othile okhethekileyo, uxakeke ngokupheleleyo ngabo.
Iimpawu zenyanga zichaziwe
Ungayiqonda njani kwaye uyitolike njani imiqondiso yelishwa
inombolo 3 ethetha ukusebenzelana nemimoya
yintoni uphawu lomhlaba
lithetha ntoni inani u-11 kwinombolo
ulufumana njani uphawu lwenyanga yakho
Eyona ilungileyo kwiimpawu zodiac ezimbi
moles emilebeni intsingiselo